‘नेपाली संघ–संस्थाहरुबीच आपसी तालमेल छैन’ – दिनेश भट्टराई | newsnepali.com
‘नेपाली संघ–संस्थाहरुबीच आपसी तालमेल छैन’ – दिनेश भट्टराई
Published on: Thu, Jul 28th, 2016 By Diwas Pokhrel
नेपालबाट अमेरिकामा व्यापार व्यवसाय गरी परिचित सामाजसेवी नेपालीका रुपमा परिचित दिनेश भट्टराई सक्रिय व्यक्ति हुनुहुन्छ । नेपालमा रहँदा ‘इच्छुमति चार तारे कल्ब’, बागबजारको संस्थापक अध्यक्ष भई सात वर्ष समाजसेवामा समय खर्चिनु भएको थियो । मोरङ जिल्ला अवस्थित ‘सम्पूर्ण सरकारी तथा अर्ध सरकारी समन्वय कमिटी’मा कृषि विकास बैंकका तर्फबाट सक्रिय भई तीन वर्ष काम गरेको अनुभव छ । उहाँ ट्रेड युनियन कांग्रेसको मस्यौदा अधिवेशनमा मोरङबाट विजयी भई अधिवेशनमा भाग लिनु भएको थियो ।
२०४८ सालमा ‘नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघ’को संस्थापकको रुपमा काम गरी २०५३ सालमा ‘नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय समिति’मा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइ काम गर्नु भएको थियो । यसैगरी २०५८ सालसम्म ‘नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघ, कृषि विकास बैंक,’ केन्द्रीय समितिको सल्लाहकारका रुपमा कार्य गरी सोही वर्ष अमेरिका आई पुग्नु भएका भट्टराई ‘जनसम्पर्क समिति क्यालिफोर्निया ‘च्याप्टरको महासचिव पदमा एक कार्यकाल पूरा गरी हाल सोही च्याप्टरको सल्लाहकारको रुपमा आवद्ध हुनु हुन्छ । उहाँ नेपालमा रहँदा ल्बड बैंक लगायत थुप्रै सामाजिक संघ–संस्थामा आवद्ध रही कार्यरत परिचित व्यक्तित्वका रुपमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो । समाजसेवा तथा सफल व्यापारीका रुपमा परिचित दिनेश भट्टराईसँग न्यूजनेपाली डट कमका प्रतिनिधिले सम–सामयिक विषयमा लिनुभएको अन्र्तवार्ता–
नेपाल र अमेरिकाबीच तुलनात्मक ढंगबाट भन्नुपर्दा के अन्तर पाउनुभयो ?
* यहाँले अति सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद । नेपाल र अमेरिकाबीच तुलना गर्ने अवस्था देख्दिन । नेपालमा म, मलाई र मेरो मात्र भन्ने हिसावबाट हेरिन्छ तर अमेरिकामा हामी, हाम्रो र हामीहरुको भन्ने दृष्टिकोण छ । यिनै कारणले होला, ३५० वर्षभन्दा कम समयको इतिहास बोकेको अमेरिका विश्व मै प्रशिद्ध बन्न सफल भएको छ । अब, कुरा ‘We the people, by the people, for the people’ भन्ने जुन किसिमको श्लोगन छ, यस किसिमको सोचाई नेपालमा छैन । मैल दुई देशबीचमा पाएको अन्तर यही हो ।
प्रजातन्त्रको हिसाबबाट नेपालको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
* प्रजातन्त्रको हिसावबाट भन्नु पर्दा अहिलेको परिवेशमा प्रजातान्त्रिक नेपाल छैन । पटक्कै छैन । यस मानेमा कि कयौं सहिदहरुको रगतबाट प्राप्त प्रजातन्त्र नाम मात्रको प्रजातन्त्र छ । भन्नु पर्दा हाल लुटतन्त्र, दिन प्रतिदिन भष्टाचार मौलाइ रहेको छ । जसका कारण सम्पूर्ण देशबासीले समस्या भोग्नु परेको छ ।
एक राजनीतिक पार्टीले अर्को राजनीतिक पार्टीबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको देखिदैन । Muscles र Money को प्रयोगबाट आफ्नो स्वार्थी राजनीति पूरा गरिन्छ । जनताको लागि सोच विचार गर्ने नेताको खाँचो छ । नेतालाई आफू र आफ्ना परिवारको चिन्ता छ । यस किसिमको प्रवृत्ति भएको कारणले गर्दा देश दिनानुदिन अधोगति तर्फ लम्किरहेको छ ।
अमेरिकामा नेपाली समुदायको बारेमा प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि ?
* अमेरिकामा नेपालीहरु विभिन्न राज्यहरुमा छरिएर बसेको पाइन्छ । नेपालीहरु विभिन्न पेशामा आवद्ध रहेका छन् । धेरै जसो उनीहरु ग्यास स्टेसन, रेष्टुरा, ग्रोसरी स्टोर लगायतमा काम गर्दछन् । यस बाहेका छिटपुट कम्पनी र सरकारी कर्मचारीका रुपमा काम गरेको पाइन्छ ।
एक जना भारतीयले ‘क्या हाल है भाइसासब ?’ भन्दा छिमेकी नै आए जस्तो भान हुने ठाउँमा ७ हजार भन्दा बढी माइल पर आएर पनि नेपालीहरुमा भने एकरुपता, सहकार्य र एकआपसमा सहयोगको भावना छैन । सतहमा हेर्दा एकले अर्को नेपालीको खुट्टा काट्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । अन्य समुदाय, भन्नु पर्दा म्याक्सिकन, यसैगरी इक्वेडर, साल्भाडोर, भारतीय समुदाय लगायत अन्य राष्ट्रकै समुदायको कुरा गर्नुपर्दा आपसी भाइचाराको सम्बन्ध राखेर बसेका हुन्छन् । तर यसको ठीक विपरीत नेपालीहरुमा भने मैत्रिपूर्ण व्यवहार हुँदैन । यो मेरो तीतो अनुभव हो ।
नेपालीहरुले अमेरिकामा किन एउटै प्रकारका धेरै संघ–संगठनहरु खोलेका हुन् ? स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?
* म सबै नेपालीलाई भन्न सक्दिन, नेपालीहरु अमेरिका आएर बसेपछि एउटा पेशा बोकेको पाइन्छ । आफू प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भएको दर्शाउनका लागि चार /पाँच जना मिलेर संस्थाको स्थापना गरिन्छ । यस किसिमका संस्थाहरु अमेरिकामा करीब १२ सयवटा पुगे होलान् । उनीहरु संस्था खोल्दा भन्दछन्, ‘यस संस्था नेपाल र नेपालीको लागि काम गर्ने संस्था हो ।’
नेपालीहरु मेक्सीकोमा पानी पर्दा अमेरिकामा छाता ओड्ने किसिमका कृयाकलापहरु गर्ने गर्दछन् ।
प्रसङ्ग बदलौ, अमेरिकामा राष्ट्रपतिको लागि चुनावी घम्साघस्मी छ, तपाईंको सहानुभूति कसलाई होला ? बताउन मिल्छ ?
* अवश्य मिल्छ, रिपब्लिकन पार्टीबाट छानिएका डोनाल्ट्रमसँग उनकै पार्टीका कतिपय नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । यो घट्ना हेर्दा पार्टी भित्र क्रस क्यानिडेट उम्मेदवारी दिन सक्ने हल्ला सुनिएको थियो । डोनाल्ट्रम यस्तो व्यक्तित्व हो, उसँग पैसा छ तर, उसले तीन /चार पटक बैंक घोटला गरेको हो, उसँग पैसा भएपनि उसँग ‘भिजन’ भएको देखिदैन। प्राइमरीमा गएर विपक्षीको कुरा काट्ने, हेपाहा प्रवृत्ति गर्ने, इलिगल इमिग्रेन्टस्हरुलाई डाडो कटाउने, बर्षौदेखि यहाँ आएर काम गरेका मानिसहरुलाई खेद्ने, १.६ मिलियन अमेरिकन मुस्लिमहरुलाई अमेरिकाबाट खेद्ने, अमेरिकन सेना पठाएर आइ.एस.आइ.सँग भिड्ने आदि जस्ता विचार पाउँदा ऊ उपयुक्त क्यानिडेट हो जस्तो लाग्दैन ।
डेमोक्राटिक लिडरको कुरा गर्नुपर्दा हिलारी क्लिन्टन र बर्नी स्यान्डरसबीच चुन्नु पर्दा म हिलारी क्लिन्टनलाई चुन्दछु । किनकी उनी १८ वर्षको उमेर हुँदा खेरीदेखि राजनीतिमा लागेकी महिला हुन् । उनीसँग लामो अनुभव छ । उनको श्रीमान् यस राष्ट्रको राष्ट्रपति भए । उनीले श्रीमान्बाट पनि धेरै मदत पाउँछिन् । उनी आफैंमा पनि राज्य संचालनको अनुभव छ । उनी देशको विदेश मन्त्रालय सम्हाल्ने अनुभबी महिला हुन् । अमेरिकामा नरसंहारको मुख्य कारक तत्वबन्दै आएको बन्दुक नियन्त्रण सम्बन्धमा उनको भिजन छ । हालसालै पनि ४९ जनाको नरसंहार भयो । यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेछिन् । यसैगरी उनी महिला तथा केटाकेटीहरुलाई मदत गर्ने विषयमा आफ्ना अडानहरुलाई कायम् नै राखेकी छिन् । उनी देश र जनताको भलाइ गर्ने विचार लिएर अगाडि बढेकी छिन्भने अन्य नेताहरु आपसी कुरा काट्ने बाहेक गहकिला विचार प्रस्तुत गर्न असक्षम देखिएका छन् ।
यिनै समय सान्दभिक अवस्थालाई हेर्दा हिलारी क्लिन्टन देशका लागि उपयुक्त उमेम्दवार हुन सक्छिन् ।
तपाईंको विचारमा अधिकांश नेपालीहरुले राष्ट्रपति पदका लागि कसलाई सहयोग गर्लान् जस्तो लाग्छ ?
* पक्कै पनि हिलारीलाई गर्दछन् । ट्रमलाई उल्लेखनीय उम्मेदवारका रुपमा हेरेका छैनन् । मेरो विचारमा हिलारी क्लिन्टन नै अमेरिकाको शासकको रुपमा उपयुक्त देखिएको कारणबाट नेपालीहरुले उनीलाई नै सहयोग गर्ने जस्तो देखिन्छ ।
अमेरिकी समाजमा भविष्यमा के गर्ने योजना बताउनु भएको छ ?
* आफ्नो दिनचर्या त गर्नै प¥यो र गरी रहेको छु । यो भन्दा अन्य नेपालीलाई सहयोग गर्न सकेंभने त्यस कार्यलाई आत्मा सन्तुष्टिका रुपमा लिनेगर्दछु । खाश योजना त केही छैन तर आफूले अरुलाई मदत गर्न सकुम् ।
अन्तमा, तपाईंलाई कुनै विचार राख्न मन छ कि ?
* हामी ७ हजार माइल पार गरेर आएका नेपालीहरु एकआपसमा भाइचारा सद्भाव राखेर अगाडि बढ्न सकेका खण्डमा सबैको कल्याण हुन्छ । अमेरिकामा बसेका नेपालीहरु राम्रा छन्भन्ने फिलिङ दिन सकियो भने यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हुनेछ ।